Hita amin'ny Apple TV + ny fizarana 3 voalohany amin'ny andiany Fizika | Avy amin'ny mac aho
Zoma iray indray, manampy ny atiny manokana vaovao ny serivisy video streaming an'i Apple. Amin'ity fotoana ity dia miresaka momba ireo andian-tantara ireo izahay Ara-batana, andiany iray napetraka tany California tamin'ny taona 80 tany ary nahitan'i Sheila Rubin (an'i Rosy Byrne) mpihetsiketsika, ny làlam-piainany.
Apple dia namoaka ny fizarana 3 voalohany tamin'ity hatsikana ity izay ny fizaran-taona voalohany dia misy fizarana 10 amin'ny antsasak'adiny mahery. Ankoatra an'i Rosy Byrne, hitantsika ihany koa i Rory Scovel amin'ny anjara asan'i Danny (vadin'i Sheila), Dierdre Friel, Paul Sparks ary Della Saba. Ao ambadik'ity andiany ity i Annie Weisman.
Amin'ny famaritana ity andiany ity dia afaka mamaky isika:
Sheila Rubin dia vehivavy mpikarakara tokantrano manintona nampijalian'ny demoniany manokana izay sahirana handalo any Kalifornia tamin'ny taona 80. Notarihin'ny feo anatiny nanesoeso izy, hahita fahombiazana sy fanafahana amin'ny làlana tsy ampoizina indrindra: aerobika.
Mba hialana amin'ny haizina misy ny fanambadiany dia manao aerôbika izy, saingy tsy navotsotra tanteraka mandra-pahitany azy fomba iray hampielezana ny fitiavanao vao manomboka manao fanatanjahan-tena miaraka amin'ny haitao miharo videotape mamorona orinasa revolisionera ary lasa mpampianatra vehivavy fomba fiainana tamin'izany fotoana izany.
Rosy Byrne dia mpilalao sarimihetsika aostralianina 42 taona, voatendry ho an'ny Emmy Award indroa ny andiany Fahasimbana, andiany izay nandraisan'i Glenn Close sy Ted Danson anjara ihany koa.
ihany koa nandray anjara tamin'ny sarimihetsika mampidi-doza, Ny mariazin'ny namako akaiky indrindra, Mpifanolo-bodirindrina, X-Men: Apokalipsy, X-Men: Gen voalohany...
Ny ambin'ireo fizarana izay ampahany amin'ny vanim-potoana voalohany premiere isan-kerinandro isaky ny zoma.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Hita amin'ny Apple TV + ny fizarana 3 voalohany amin'ny andiany Fizika